कसरी बने इन्द्रेणीको कृष्ण कंडेल ? को थिए उनी सबैले एक पटक पढौ ! – Khabarhouse
Khabar house | २९ पुष २०७६, मंगलवार ०६:४१ | Comments
दिपक के.सी. काठमाण्डौ । नेपाल एक भुपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । नेपाली समाजमा बिभिन्न जातजाती, धर्म, लिगं का मानिसको बसोबास छ । शिक्षा,स्वास्थ्य र रोजगारको अभावमा जगेडिएको समाजलाई कसरी सभ्य समाजको निर्माण गर्ने भन्ने प्रश्न कताकती समाजमा उठ्न थालेको पाइन्छ । कु’कृति र बि’सँगतीले समाज जेलिएको छ । समाज कु’संस्कारमा रुमालियको छ ।
देशको मौलिकता, भेषभुसा, भा’षा संस्कृतिलाई भुलेर बिदेशि सं’स्कारलाइ समाजमा भित्र्याउने प्रबितीले हाम्रो समाज पछि परेको छ । समाजमा धेरै किसीमका चुनौतिहरु आउने गरेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव संगै अर्थिक समस्या समाजको मुख्य कारक तत्वका रुपमा देखा परेको छ । नपालको दुरदराज बस्तीमा सिटामोलको एक टुक्रा नपाएर जिवन र मृत्युसंग छ’टपटाइ रहेका ति मानवरुपी अंगहरु अहिले पनि प्रस्ट हाम्रो आँखा अगाडी झल्कीरहेका छन् ।
समाजमा यस्तो खाले कालो पर्दा लागेको छ । दुरदराज बस्तीमा रहेका ति कलिला भाइबहिनीले अँझैपनि गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न पाएका छैनन्,यस्ले गर्दा समाजमा रहेका जल्दाबल्दा युवा खाडि मुलुुकमा पलायन हुनु परेको छ । यस्तो परिस्थीतिमा पनि सरकार टुलुटुलु हरेर बसेको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा नागरीकको मौलिक हक अधिकार सम्वन्धी प्रष्ट पारेको छ ।
गास, बास, कपास जनाताको मौलिक अधिकार भित्र पर्दछ तर नेपालमा कतिपय दुरदराज बस्तीमा नागरीक लाई हात मुख जोड्न हाम्य हाम्य परेको छ । सामाजमा रोग र भोक मारीले जरा मौलाउँदा पनि सरकार आँखा चि’म्लेर बसेको छ । नेपाल संघियता मा गइसकेपछि नेपाली लागरिकको ठुलो आसा र अपेक्षा थियो तर अहिले आएर त्यो सबै बालुवामा पानी खनायझैं भाको छ । यसप्रति सरकारको ध्यान जान जरुरि छ ।
समाजमा यसरी लागेको कालो पर्दालाई हटाउनका निमित्त बिश्वमा चर्चित कार्यक्रम एबिसी इन्द्रेणीका सञ्चालक कृष्ण कंडेलले अतुलनिय भुमिका निभाउनु भएको छ। उज्यालो नेपाल समृद्धीका लागी साँकृतिक अभियानका साथ अघि बढेको लोकप्रिय कार्यक्रम एबिसी इन्द्रणीे पुराना सर्जकको सम्मान र नँया प्रतिभाको खोजिमा अघि बढेको छ। संस्कृती सभ्यताको जननी हो भन्ने मुल नाराको साथ अघि बढेको एबिसी इन्दे्रणीले पनि लोक सँस्कृतीको माध्यमबाट देशको संस्कृती र सभ्यतालाइ बचाइराखेको कुरा बिश्वभरी अवगतनै छ
प्रशिद्ध कार्यक्रम इन्द्रेणीका सञ्चालक कृष्ण कंडेलले सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ । बिगत दश बर्ष देखी सञ्चालन हुँदै आएको सो कार्यक्रको माध्यम बाट दु’खि गरीब तथा रोगले पिल्सीएका जनताले साहारा पाउँदै आएका छन् । इन्द्रेणीका सञ्चालक कृष्ण कंडेल दुरदराज बस्ती बस्तीमा लुकेर रहेका ति चपेटामा परेका आवाजलाई बुलन्ध पारेर न्याय दिने काम गर्नुभएको छ ।
समाजमा हुने संस्कार,संस्कृति बिरोधि आवाको बि’रुद्धमा आवाज उठाउने त्यस्ता प्रकारका खराख तत्वहरुलाई जरैबाट उन्मुलन गर्नुमा उहाँको निकै ठुलो भुमिका भएको पाइन्छ । समाज रुपान्तरण भन्नाले समाजमा रहेका ख’राब तत्वहरुलाइ उन्मुलन गर्नु नै समाज रुपान्तरण हो । कृष्ण कंडेल कलाकार मात्र नभई समाजिक व्याक्तीत्व पनि हुनुहुन्छ । उहाँले नपालमा भैपरी आउने दैबिक प्रकोपमा परेका नागरिकको उद्धार गर्दै आउनुभएको छ ।
उहाँ आगलागी भएका बस्तीमा गएर राहत प्रदान गरेका जोलन्त उदाहरण छन् । बाढी पहिरोले उठिबास गरायका नाना,माना, छानाको खोजिमा छटपटायका दुखि गरीबको बस्तीमा पुगेर सहयोग गरेको यस्लाई पनि महान कार्यको रुपमा लिने गरीन्छ । जहाँ राज्य पनि अहिले सम्म पनि पुग्न सकेको छैन जहाँ कृष्ण कंडेल पुग्नुभएको छ । अशिक्षामा रुमालियका भाइबहिनी लाई इन्द्रेणीले सहयोग गर्दै आएको छ । यसरी हेर्दा बिश्व प्रशिद्ध कार्यक्रम इन्द्रेणीले सामाजिक रुपान्तरणमा सरकार पक्षलाई चुनौति दिएको पाइन्छ । त्यस कारण समाज रुपान्तरणमा कृष्ण कंडेलको अतुलनीय भुमिका रहेको पाइन्छ ।